शब्दकोश: चैत २८ देखि चैत २८ : अविरल चमत्कार
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, April 12, 2009
सिकारु April 13, 2009
धाइवा जी तपाइको यथार्तबादि देशप्रतिको चिन्तनमनन अति नै सकारात्मक लाग्यो । जति लेखे पनि भने पनि यिनिहरुले आफ्नो पाइलालाई देशको लागि मोडन किन तयार हुदैनन कुन्नि? नयाँ बर्षले सबैमा सकारात्मक सोचको अभिबृदि गराओस।
अनि तपाई लाई पनि नयाँ बर्षको मंगलमय शुभकामना ।
दीपक जडित April 13, 2009
परिवर्तनको ठुलो हौवा मनमा पालेर पनि यस्तो भएको हो कि ? जे होस् नयाँ वर्षको सँघारमा छौं हार्दिक शुभकामना है ।
Dilip Acharya April 13, 2009
मेरो बिचारमा यो चमत्कार भन्दा पनि 'लाज पचेपछि जे गरे पनि हुन्छ' भन्ने मनाशायले गरीएको अत्याचार हो !।
यहि ताल हो भने संबिधान बन्न पञ्च बर्षीय योजना चाहिने देखेको छु मैले त । यो बारेमा कमलजीले यौटा चित्त बुझ्दो टाँसो राख्‍नु भएको छ। फुर्सत भएमा हेर्नुहोला :
त्यो यहाँ छ ।
एकल यात्री April 14, 2009
>Jotare Dhaiba< April 16, 2009
धन्यवाद सबैलाई टिप्पणी एवम् शुभ कामनाका लागि ।
शुभ काना त सधैँ छँदैछ, र पनि कुनै साइतमा औपचारिकतावश भए पनि पुनश्‍च: वर्ष २०६६को शुभ कामना व्यक्त छुटपुट भएकाहरूलाई यिने हरफ मार्फत मङ्गलमय कामना अर्पण गर्छु ।
दीपकजीले भन्नुभए झैँ आशा चाहिँ नेपालीहरूले पालेकै हुन् । हुन पनि उथलपुथल हुनसम्मकै भएकै हो । राम्रो कुरा हुनेछ भन्ने आशा गर्नु कुनै भूल थिएन, त्यसअनुसारको परिपूर्ति गर्नमा मेलो सुरु गरिदिए मात्रै पनि ठूलो राहत मिल्नेथ्यो ।
दिलीप दाइ, संविधान त तै पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत ने बनाउलान् रे, तर बनेको संविधान पनि कस्तो पो बन्ने हो कुन्नि । एउटा दलको हालीमुहाली र सर्वसत्तावाद लादिँदै गएर घोषणापत्र जस्तो संविधान त बन्ने होन ? समय त झन् अन्योलमय छनक देखाउँदैछ ।
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा April 17, 2009
क्याफे मंगलमले नया ठेगानामा सरेपछि एकछिन त पत्तो लगाउन गाह्रो भयो फेरी धाइबाको प्रोफाइल हेरेर ठेगाना खोजेर बल्ल तल्ल आइपुगे ।
धाइबाका सबै लेख रचनाहरु राम्रा छन , हुन त यिनीहरुलाई सड़कमा ओर्लेर ढुंगामूढा गर्नेका कुरा मात्र सुन्ने बानी लाग्या छ, तैपनि बौद्धिक क्षेत्रले घचघचयाउने चाही यसरी नै हो, समसामयिक लेखका लागी धन्यवाद !
दूर्जेय April 18, 2009
बोलीदेखि गोलीसम्ममा अविरल चमत्कार गरिरहने "धन्य हुन् हाम्रा महामानव ! शान्ति र सुव्यवस्था मुलुकको कुनै पनि हिस्सामा शेष देखिँदैन । अराजकतालाई अनुमोदन गर्नमा आधिकारिक मोर्चा नै बनेको देखिन्छ । नेपाल काङ्गुडी गाई भएको छ, जो गोरसको राम्रै असुल गरिएर छाडा छाडिएको छ" ।
खुब राम्रो तरिकाले लेख्नु भयो। खुब मन पर्‍यो। यथार्थबादी लेख।
>Jotare Dhaiba< April 19, 2009
धन्यवाद कृष्‍णजी र दुर्जेयजीलाई ।
मारमुङ्ग्री गरेपछि मात्र बल्ल चासो देखाउने संस्कृति विकास भएको हाम्रो नेपालमा अक्षरको दबाब इ कसले कति मात्रामा महसुस गरेर त्यसअनुरूपको ताउरमाउर जनाउला काममा अग्रसर भएर ! तर आफ्नो धर्म नछोड्ने पथमा हामी लाग्नैपर्छ कृष्‍णजी । यही गर्दैछौँ हामी सबै । अंश-अंशमा कसो असर नगरिरहेको होला ?
ढिलो भएँ की क्या हो !
गएको कुरामा भन्नु के छ र ? अब जे होस त्यों चाहीं राम्रै होस ...